मत जन्मजात देखिनै कर्मले ठगिएको मान्छे,,,, – Sajha Achham
२०७८ श्रावण १९ मंगलवार ०२ बजे ५१ मिनेट
मत जन्मजात देखिनै कर्मले ठगिएको मान्छे,,,,
sajhaachham२०७८ असार १४
थर थाहा पाउदा कोठा नदिएको गलत बिषयलाई लिएर आधुनिक समाजका बिद्वानहरुले अतिरन्जित गरि अब त्यसो हो भने त जातीय दंगा भड्किन्छ,,,गरि गरिएका केही टीका टिप्पणी प्रति वितृष्णा पैदा भयो । कोटाको समिक्षा गरौ आँऊ
तिम्रा बा त जागिरे ,,,अनि जागिरे नभए पनि तिम्रा त भकारीबाट एका बिहानै निकाल्ने अन्न पकाउन कति नै टाईम लाग्थ्यो र? मेरा बा आमा भने तिम्रो काममै ब्यस्त अनि तिम्रै घरबाट लिएर गएको अन्न पकाउन कति ढिला हुँदो होला,,, तैपनि सकि नसकि तिमी संगै अनि समय संगै दौडिन कोसिस गरिरहेको मान्छे म,,,,,तर ,,पनि,,,मेरो बाध्यता,,,,छ
कहिले काँपि कलम किन्न दाउँरा बेच्न बजार गएर फर्किदाँ स्कुल ढिला पुगे,, कहिँले तिम्रैहरुको जन्तिमा बाजा बजाउन गए त्यसैले स्कुल जान सकेन ,,, मैले गृहकार्य नै गर्न पाएन् तिम्रै अगाडि मैले गृहकार्य नगरेको भनेर कतिदिन शिक्षकले कुखुँरा बनाउदा तिमी टुलुटुलु हेरिरहेका थियोै । र मलाई कुँखुँरा बनाउदै तिमिलाई पाठ सिकाउदै गर्दा मैले के सिके अनि मेरो मनमा कस्तो भयो होला एकछिन बिचार गरौन ।
एकदिन त आरनमा बसेर तिम्रै काम गर्दागर्दै ढिलो हुदाँ जुरुक्क उठेर त्यसै स्कुल पुगे तिमी त चिटिक्क सफाँ भएर स्कुल गएका थियौ,,, अनि तिम्रै अगाडि शिक्षकले नुहाएर भोली स्कुल आउ आज फर्केर घर गैहाल,,, भनेका थिए त्यो त बिर्सेका छैनौ नी ? अनि तिमिले त्यो सिकेको र मैले त्यो दिन गुमाएका कुरा कसरी एउटै होलान् यो सोचनिय बिषय होईन र ? तिमिले पानी पँधेरीमा जादाँ कहिँलै पालो कुर्नु परेको छ र ?
मैले भने पँधेरोमा पानीपालो कुर्दाकुर्दै कतिदिन स्कुल जान ढिलो गरे तिमिलाई थाहा छ नी ? त्यस्ता उदाहरण त म संग कतिछन कति अनि किन कोटाका पछि परेका छौ । तिमिलाई त थाहा छ,,,,, तिम्रो पल्लाघरे दाईको बिहे हुदाँ तिमिले बिहेमा २÷३ दिन गयौ भने यता तिम्रो स्कुल बिग्रिन्छ । ,तिम्रै दाईको बिहेमा मैले बाजा अनि डोली लिएर नगए उता हाम्रो धर्म बिग्रिन्छ अनि हाम्रो समाज बिग्रिन्छ ।
तिमिलाई किन कोटा चाहिँयो भन्न त सजिलो छ नी,,,, तर कहिलै बुझ्ने कोशिस गरेनौ यो समुदायलाई यी ब्याक्तिलाई सँदियौ देखि हाँमिले कुनै अवसर नदिएरै पछाडि पारिएका हौ भनेर । समाजको मुलधार बाट पन्छाएर यो स्थिति सम्म आईपुग्दा समेत यो त अति हो है ,,,अबत समतामूलक समाज निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ कसैलाई विभेद गर्नु हुदैन भनेर,,, कँहिले चेत खुल्छन तिम्रा ,, हो अब तिमी यति बुझकी तिम्रै काम गर्दागर्दै अनि राज्यले मलाई आफ्नो मुलधार सम्म पुर्याउन नसक्नु र समावेश गर्न नसक्नु अनि मैले गुमाएका ती दिनहरु र तिमिले सिकेका ती सबै कुराको हिसाब गर्दा हुन आउने कुल हिसाब नै कोटा हो ।
अब मैले यति भन्दा तिम्रा बाले मेरा बा को जस्तै किन काम गर्न सकेन किन जागिर खान सकेन भनेर प्रश्न गर्न सक्छौ ? यो समाज तिम्रै परिधिभित्र घुमिरहेको छ मेरो बालाई अवसर बाट बन्चित गरिरहेको छ ।
तिम्रो बा त गाउँमै शिक्षक, गाउँमै अहेव, गाउँकै पुजारी अनि प्रधानपञ्च हुन अनि मेरो बा तिम्रौ बाको अह्राएको काम गर्ने मान्छे हुन किनकि तिम्रो पुर्खाले निर्माण गरेको हाम्रो समाजको संरचना यस्तै छ,,,,अब कोटा तिमिलाई कि मलाई ? अर्काे अचम्मलाग्दो पक्ष के छ भने दलित आरक्षणको विरोध गरेको समूहले महिला आरक्षणको विरोध गरेको देखिएको छैन ।
महिला आरक्षण कथित् माथिल्लो जातका महिलाले पनि पाउने भएर विरोध नभएको हो भन्न सकिन्छ । दलित आरक्षणको मात्रै किन विरोध हुन्छ यो समाजमा ? जबकि दलित, जनजाति र महिलाका लागि दिइएको आरक्षणको सिद्धान्त एउटै हो । कथित् उच्च जातको मुकुण्डो लगाएर आफ्नो घरमा आउने आरक्षणको सुविधा लिने तर दलितको आरक्षणको डाह किन गरिएको छ ? यसमा पनि उच्च जातीय अहङ्कार छताछुल्ल भएको पाइन्छ ।
गाउँमा आउने योजनाको मालिक पनि तिम्रै बा, दलितका नाममा आउने योजना राहत अनि दलितमूखि कार्यक्रममा पनि तिम्रै बाको हालिमुहाली,,,,,हुकुम दिनु पर्ने अनि त्यसको नाईके पनि तिम्रै बा नै हुन,,,, काम गरेर ठगिने पनि तिमिलाई राम्रोसँग थाहा छ मेरै बा हुन,,,, अब समिक्षा गरौ तिमिले देखेको समाज र मैले भोगेको समाजको त्रुटि कहाँनिर छ ।
कुरा गर्छाै छुवाछूत अनि विभेदका,, तिम्रा हजुरबाले म माथि गरेको विभेदको कुरा नगारौं,,,, तिमी त आधुनिक मान्छे हौनी ? तिमिलाई त परिवर्तन चाहिँएको छनी ? आँफुलाई आधुनिक अनि पढे लेखेको यो समाजको समाजसेवी भन्न पनि रुचाउछौनी ? तिमिले किन छुवाछूत र विभेदलाई बढुवा दिईरहेका छौ ।
मेरो हजुरबाले अगोलेको संस्कार गलत हो भन्ने आट अहिले सम्म किन गर्न सक्दैनौ,,,अचम्म त मलाई यहाँनीर लाग्छ तिमी भन्छौ विभेद समयले आँफै हटाउने छ । खोई तिमी नसुध्रिएको मेरो देशमा तिम्रा छोरा कसरी सुध्रिएलान ? अब यो समाजमा रहेको विभेदको जालो हटाउन कँहिले लाग्छौ ? अहिले नगरे कैले गर्छाैं ? अझै पनि तिमिले दिनहुँ गरिरहेको गल्तिको कुनै महसुस अनि पछुतो छैन है ? यतिमात्र होईन तिमी नसुध्रिय कुनै दिन तिम्रो यो समाजमा राष्ट्रबादको खोलले छोपेर तिमी नै बस्ने छौ,,,,,,